Posted on 11 / 18 / 2019 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Markii loo isticmaalo kaabis ahaan, Pyridoxal Hydrochloride wuxuu daaweyn karaa ama ka hortagi karaa dhibaatooyin caafimaad oo badan. Badanaa waxaa lagu qaataa cirbad, afka ama cuntada lagu daro.
Ilaha guud ee laga helo pyridoxine hydrochloride vitamin B6 ee cuntada waxaa ka mid ah badar, digaag / turkey, khudaar iyo miraha.
2. Maxay Jir-dhiseyayaashu Ugu Baahan Yihiin Fiitamiinnada - pyridoxine Hydrochloride?
Jidh-dhise ahaan ahaan, waxaad u baahan doontaa nafaqooyin ka badan kuwa hoggaamiya qaabnololeedka fadhiidnimada ah. B-6 pyridoxine hydrochloride ayaa si gaar ah muhiim kuugu ah adiga maxaa yeelay waa shuruud ku jirta muruqyada fosforylase, waxqabad laxiriira metabolismka glycogen. Marka la soo koobo, waxaad u baahan tahay fitamiin B6 si aad u hesho dheef-shiid kiimikaad caafimaad leh. Faytamiin B6 wuxuu wanaajiyaa shaqooyinka enzymes ee ka qayb qaata burburka borotiinka.
Saameynta Pyridoxine hydrochloride jirka wax badan ayey ku leeyihiin doorkiisa dheef-shiid kiimikaad. Taasi waa sababta marka la isticmaalayo, ay lagugula talineyso inaad isticmaasho quraac borotiin ah kahor intaadan jimicsiga ku dhicin. Waxa kale oo aad qaadan kartaa cuntooyinka hodanka ku ah borotiinka intaad ku guda jirto tababarkaaga, intaad tababbarayso, tababarka ka dib iyo ka hor intaadan seexan.
Si kastaba ha noqotee, tani macnaheedu maahan inaad iska indhatirto cunnooyinka kale. Jidhkaagu wuxuu u baahan yahay tiro macdano kale oo muhiim ah oo si habsami leh u shaqeeya oo kaa ilaaliya cudurrada.
Waxaad sidoo kale ubaahantahay tamar badan inta lagu jiro shaqada. Pyridoxine hydrochloride waxay u faa'iideysaa jirkaaga iyadoo kordhinaysa heerka gubashada karbohaydraytyada kujira unugyadaada. Tani waxay hubinaysaa inaad hesho tamar kugu filan.
1939, Folkers iyo Harris waxay go'aamiyeen dhismaha pyridoxine. Lix sano kadib, Snell wuxuu muujiyay in B6 ay leedahay laba qaab: pyridoxamine iyo pyridoxal. Magaca Pyridoxal Hydrochloride wuxuu yimid sababtoo ah fitamiin B6 wuxuu qaab ahaan ula midoobay pyridine.
Ka mid ah fitamiinada B, Pyridoxal Hydrochloride waa tan ugu muhiimsan caafimaad ahaan iyo maskax ahaanba jir dhiseyaasha. Waxay ka caawisaa koritaanka unugyada cusub, iyagoo sharraxaya Pyridoxine hydrochloride bodybuilding karti. B6 sidoo kale waxay caawineysaa isku-dheellitirka potassium iyo sodium, iyo soo-saarka aashitada nukliyeerka, DNA iyo RNA oo iyana qayb ka ah.
Yaraanta Pyridoxal Hydrochloride waxay u horseedaa neerfo, xanaaq, hurdo la'aan, daciifnimo, carrab bararsan, ciddiyaha ruxma, arthritis, iyo lafo-beelka.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay hal cilmi baaris, qiyaasta daawada Pyridoxal Hydrochloride ee hadda lagula taliyay shakhsiyaadka firfircoon ee Dowladda Mareykanka kuma filna.
Tan macnaheedu waa kuwa xadidaya kooxaha cuntada ama xakameynaya kalooriyada waxaa laga yaabaa inay la kulmaan khatar yaraan. Sidaa darteed, lagama yaabo inay ka faa'iideystaan ​​saamaynta pyridoxine hydrochloride haddii ay kaliya qaataan qiyaasta sida ay dawladdu kugula talisay.
Iyadoo lagu saleynayo natiijooyinka cilmi-baaristaan, waxay noqon doontaa caqli gal inaad la tashato khabiirkaaga daryeelka caafimaadka si uu kaaga caawiyo go'aaminta qiyaasta jirka ee ugu fiican / ku filan ee pyridoxine hydrochloride.
B-6 pyridoxine hydrochloride wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa habaynta niyadda. Tani waa sababta oo ah waxay abuurtaa neurotransmitters-ka xakameeya shucuurta. Pyridoxine hydrochloride ee uurka aad ayey muhiim ugu tahay haweenka shucuurta leh ama isbeddelaya niyadda ay sababaan isku dheelitir la'aanta hormoonnada xilliga uurka.
Hal daraasad oo ku lug leh 156 qof oo qaan-gaar ah oo qaba cillad maskaxeed oo fudud iyo heerarka dhiigga ee sareeya ee homocysteine ​​ayaa lagu ogaaday in qiyaasta sare ee pyridoxine hydrochloride ay hoos u dhigeyso heerarka homocysteine ​​ee dhiigga iyo sidoo kale waxay yareysaa hoos u dhaca qaybo maskaxda ka mid ah oo qatar ugu jira Alzheimers.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka pyridoxine hydrochloride waa in loo isticmaali karo in lagu daaweeyo astaamaha PMS oo ay ku jiraan xanaaqa, niyadjabka, iyo walwalka. Cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin in fitamiin B6 uu daaweyn karo astaamahan maxaa yeelay wuxuu abuuraa neurotransmitters oo gacan ka geysta hagaajinta niyadda.
Tobanaan sano, fitamiin B6 ayaa loo isticmaali jiray daaweynta lallabbada iyo matagga haweenka uurka leh. Sidoo kale waa qayb ka mid ah Diclegis, daawo loo isticmaalo daaweynta cudurka subaxa. Tani waxay ka mid tahay faa'iidooyinka ugu sarreeya ee loo yaqaan 'pyridoxine hydrochloride' haweenka loogu talagalay haweenka qaba xaaladdan inta ay uurka leeyihiin.
Qiyaasta saxda ah ee pyridoxine hydrochloride ee uurka waxay ku kala duwan tahay qof ilaa qof. Daraasad ku lug leh 342 haween uur leh ayaa lagu ogaaday in qaadashada maalin kasta ee 30mg ee fitamiinku ay si aad ah hoos ugu dhigtay dareenkooda lallabbo shan maalmood uun ka dib bilowga daaweynta.
Pyridoxine hydrochloride waxay door weyn ka ciyaartaa kahortaga xirmada halbawlayaasha sidaas awgeed yaraynta halista cudurka wadnaha. Haddii aad leedahay heerar hoose oo fiitamiin B6 ah, halista aad ugu jirtid cudur wadne ku dhowaad waa labanlaabmi doontaa marka loo eego kuwa leh heerarka caadiga ah ee fitamiin dhiigga ku jira. Faytamiin B6 wuxuu yareeyaa fursadaha halbowlayaasha inay xirmaan iyadoo hoos u dhigeysa heerarka 'homocysteine' ee dhiiga.
Tani waa laga yaabaa inay tahay tan ugu muhiimsan isticmaalka pyridoxine hydrochloride ayaa la siiyaa faafitaanka kansarka maanta. Haddii aad qaadaneysid Pyridoxine hydrochloride oo kugu filan, halista aad u leedahay inaad ku soo baxdo noocyo kansar ah ayaa hoos loo dhigi doonaa. Sababta tan waa mid aan caddayn laakiin cilmi baarayaashu waxay rumeysan yihiin inay la xiriirto awoodda B6 si loola dagaallamo caabuqa sababa xaaladaha dabadheer sida kansarka.
Cilmi baaris gaar ah oo la sameeyay si loo ogaado xiriirka ka dhexeeya heerarka pyridoxine hydrochloride iyo kansarka naasaha, waxaa lagu ogaaday in heerarka ku filan ee B6 ee dhiiga ay hoos u dhigeyso halista kansarka naasaha, gaar ahaan haweenka postmenopausal.
Faytamiin B6 wuxuu caawiyaa kahortaga cudurada indhaha, gaar ahaan kuwa laxiriira gabowga ku dhaca da'da (AMD). Markaad heysato heerar sare oo ah 'homocysteine' oo ku qulqulaya dhiigaaga, waxaad halis sare ugu jirtaa inaad ku dhacdo AMD. Pyridoxine hydrochloride waxay gacan ka geysaneysaa yareynta heerarka sare ee homocysteine ​​ee dhiiga taas oo hoos u dhigeysa halista AMD.
Cilmi-baaris kale ayaa xiriirisay dhibaatooyinka indhaha iyo heerarka hoose ee dhiigga; gaar ahaan dhibaatooyinka indhaha ee keena in xididada xididada xididku ku xirmo isha. Heer hoose oo ah 'pyridoxine hydrochloride' ayaa sidoo kale lala xiriiriyay cilado ku dhaca isha.
Pyridoxine hydrochloride waa badbaado oo ay u isticmaali karaan dhisayaasha jirka. Sidoo kale waa amaan isticmaalka caafimaadka. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay saameyn kala duwan dad kala duwan Qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca pyridoxine hydrochloride waxaa ka mid ah:
Haddii aad isku aragto waxyeelo daran pyridoxine hydrochloride markaa markaa waxaa kuu fiicnaan lahayd inaad raadsato daryeel caafimaad.
Qiyaaso aad u sareeya oo ah Pyridoxal Hydrochloride waxay sababi karaan xanuuno xagga neerfaha ah. Cilladahaani waxay, u horseedi karaan dhibaatooyin xasilloonida iyo luminta dareenka lugaha. Waxa kale oo jira warbixino qaarkood oo ah qiyaaso badan oo ah pyridoxine hydrochloride waxay u horseedi kartaa jawaab celin maqaarka. Nasiib wanaagse, markii aad joojisid qaadashada qiyaasta sare, si buuxda ayaad uga soo kaban doontaa.
Markaad ku jirto daawada Pyridoxal Hydrochloride, waa inaadan joojin, bilaabin inaad u isticmaasho daawo kale, ama aad beddesho qiyaasta adigoon oggolaansho ka helin daryeel caafimaad bixiyahaaga.
In kasta oo Pyridoxal Hydrochloride uusan lahayn xiriir la taaban karo oo daran ama daran oo lala yeesho daawooyinka kale, had iyo jeer way wanaagsan tahay in laga taxadiro.
Sida Luminal, Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) wuxuu u jajabiyaa kiimikadan inuu jirkaaga ka baabi'iyo. Qaadashada iskudhafka Dilantin iyo Pyridoxal Hydrochloride waxay yareyn doontaa waxtarka kii hore ee jirkaaga. Tani waxay kordhin kartaa fursadaha inaad la kulanto qallal.
Pyridoxal Hydrochloride waxay leedahay is dhexgal dhexdhexaad ah oo ka badan 70 daroogo oo kala duwan. Marka, kahor intaadan isticmaalin wax daroogo ah oo lagu daray, hubi inaad laxiriirto bixiyaha caafimaadkaaga.
Faa'iidooyinka Pyridoxal Hydrochloride ee jir-dhiseyaasha waa badan yihiin. Kaliya maahan kuwa jirka dhisa, cayaaryahan kasta oo halis ah wuxuu ubaahanyahay inuu haysto fitamiinkan. Si kastaba ha noqotee, waa inaad u isticmaashaa adoo adkeynaya qiyaasaha ay kugula taliyeen dhakhaatiirta caafimaadka.
Sidee Flibanserin U Caawisaa Haweeney Hormoonka Galmada	Synephrine HCL Powder - Dufanka gubi iyo miisaanka oo dheeri ah